Nzuzo nke Ngwaahịa ọhụrụ Apple zoo na Jamaica | Esi m mac
Nzuzo nke Ngwaahịa Ọhụrụ Apple zoo na Jamaica
E nwere ọtụtụ arụmụka n'etiti ndị ọrụ Apple gbasara asịrị na ọnya nke ngwaahịa na ọrụ Apple. Enwere ndị chọrọ ịmata ihe niile gbasara ụlọ ọrụ anyị, mana anyị na-ahụkwa ndị na-achọghị ozi gbasara ngwaahịa ahụ ruo mgbe ha chọtara ya n'ụlọ ahịa. Ọ bụ ụzọ nke ijuanya onwe anyị na anwansi niile nke ngwaahịa Apple.
Ọ bụrụ na anyị jụọ ụlọ ọrụ ahụ, ọ ga-agwa anyị na ọ na-eme ihe niile enwere ike iji zere nkwụsị, ọtụtụ nde ndị etinye ego na R&D nọ na nsogbu, yana uru ndị asọmpi ahụ. Ma olee otu o si eme ihe a? Fildebanye Ngwa Ngwaahịa na Jamaica.
Mgbe akara chọrọ ịdebanye aha ngwaahịa, ọ na-agakarị ịdebanye aha ya na a Patent na Trademark ụlọ ọrụ, n'ụzọ dị otú a na-ekwe nkwa ihe ùgwù ụfọdụ. O zuru ezu idebe ọrụ ahụ aha? N'ọtụtụ oge, ọ ga-ekwe omume ịkpọ aha onye nrụpụta na nkọwa ya, ọbụlagodi ị nwere ike ịme ntanetị.
Kedu ka ị ga - esi zere nke a? Ọ bụghị mba niile na-enye nghọta a na ndebanye aha ngwaahịa. Mba dịka Jamaica, Tonga, Iceland, South Africa na Trinidad na Tobago na-egbochi nyocha ngwaahịa ha.
Maka nke a Apple na-emepụta ụlọ ọrụ shei na mba ndị a. Ebumnuche nke ụlọ ọrụ ndị a bụ iji zere mmekọrịta ọ bụla na Apple na ịdebanye aha ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ka nzuzo. A na-eme atụmatụ na ụlọ ọrụ apụl emeela njikwa a karịa oge 300, yana ngwaahịa ndị nwere ọhụụ na mkpa dị ka Apple Watch. Mana ọbụghị sọọsọ Apple na - eme ihe a, Google “na - ezo” ozi ya n’ụzọ dị otu a.
Ugbu a bụ oge ịme ka iwu kwadoro ngwaahịa a na mba ụlọ ọrụ ahụ. Na Iwu ahia ahia US, na-ekwu maka ngalaba 44b:
Ọ na-enye nchedo maka akara maka mmepe nke ngwaahịa a maka ọnwa nke ọnwa 6, ọ bụrụhaala na enwere ike igosipụta aha mbụ nke ngwaahịa a na mba ọzọ.
Na nke a, ụdị ndị na-eme ihe a ha na-erite uru site na ọnwa 6 maka mmepe nke ngwaahịa ahụ na nchebe nke ụlọ ọrụ Patent ha. Ndabere bụ etu oke ihe a si dị oke ọnụ ya mere, ọ bụ naanị ụlọ ọrụ ole na ole dị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Nzuzo nke Ngwaahịa Ọhụrụ Apple zoo na Jamaica
Angela Ahrendts na -lọ Ahịa Apple na-esote
Tim Cook nwere ike ịbụ osote onye isi ala United States, dị ka WikiLeaks dere